Oyi ihu. Kedu ihe ọ bụ, kedu ka esi hibe ya na kedị ihe bụ nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọtụtụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-emetụta ihu igwe. Ofkpụrụ nke mgbanwe ndị a bụ ndị na-eme ka ikuku ghara ịdị na mbara igwe, nkwụsi ike, ikuku nke ikuku, mmiri ozuzo, wdg. Ikekwe ị nụla ka onye ihu igwe na-ekwu ọtụtụ oge na-asị a ihu oyi. Kedu ihe bụ ihu oyi a?
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe ihu oyi bụ, etu esi akpụ ya yana ihe nsonazụ ahụ nwere maka ihu igwe.
1 Kedu ihe bụ ihu oyi
2 Olee otú ọ kpụrụ
4 Ozugbo agafee n'ihu
Kedu ihe bụ ihu oyi
Mgbe anyị na-ekwu maka ihu, anyị na-ezo aka na njikọ njikọta n'etiti igwe ikuku abụọ nwere agwa dị iche iche. Igwe ikuku na-ekesa ma nwee njirimara dị iche iche dabere na mgbanwe ihu igwe ndị anyị kwuru n’elu. Otu n’ime ihe ndị kachasị eleba anya na ụkpụrụ ikuku iji mara njirimara nke ihu bụ ọnọdụ okpomọkụ.
Site na mgbanwe a, ọkachasị, anyị nwere ike ịmata ụdị ihu na-abịa na mpaghara. Ọ bụrụ na ọ bụ ihu oyi, ihu ọkụ, wdg. Ọzọ nke ikuku mgbanwe nke a ga-eme ihu na ihu bụ liru mmiri, ikuku ikuku na ndu na ikuku ikuku.
N'ihu oyi bụ nke na-egosi ókè n'etiti ikuku oyi na-agagharị agagharị, na ikuku ikuku na-ekpo ọkụ. Dị ka ọ dị, n'ụdị ihu a bụ oke oyi nke na-ekpochapụ ikuku ikuku dị ọkụ. Ọ dị mkpa ịmara na igwe ikuku anaghị agwakọta n'otu ihu. Ma ọ bụghị ya, a gaghị enwe ụdị ihu dị otú ahụ. Anyị kwesịrị iburu n'uche ihe dị iche na njupụta mgbe anyị na-ekwu maka igwe ikuku.
Cheta na ikuku na-ekpo ọkụ dị obere karịa ikuku oyi, ya mere ọ ga-arị elu mgbe niile. Mgbe igwe ikuku oyi na ikuku ikuku di oku zutere, obu ikuku oyi na-ebughari ngwa ngwa n'ihi na o di otutu. Nke a na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-aga ogologo n'ihi na ọ pere mpe. Ọ bụrụ na anyị nwere ihu oyi, n’ozuzu, okpomọkụ ga-ada ebe ikuku kacha oyi dị n’elu ala.
Olee otú ọ kpụrụ
Foto - Wikimedia / HERMENEGILDO SANTISTEBAN
Anyị ga-enyocha ntụpọ site na ọkwa otu esi etolite ụdị ihu a. Mgbe anyị nwere ikuku nke iru mmiri na nke na-adịghị agbanwe agbanwe, mgbe ọ na-ebili n'ihi njupụta dị ala, ọ ga-adaba na nkedo na ọnọdụ okpomọkụ nke troposphere. Ka anyị na-abawanye elu, ọnọdụ okpomọkụ na-agbada na grajentị ọkụ. Nke a ga - eme ka ikuku na - ekpo ọkụ banye n’igwe ojii.
Dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na ọnụọgụ nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ nke na-eme ka ọ dị iche, dị iche iche ụdị igwe ojii. Ọ bụrụ na ikuku oyi na-ewepu nnukwu ikuku ikuku na ọkwa dị elu, tAnyị ga-ejedebe ikuku ndị ọzọ nke ga-emebi na elu. Nke a ga - eme ka ihu igwe dị n’igwe ojii cdị cumulonimbus.
Ofdị igwe ojii a na-ebute oke ikuku ikuku nke na-ebute oke mmiri ozuzo. N'ime ihe ịtụnanya anyị nwere ike inwe, anyị nwere akụ mmiri igwe, ebili mmiri eletrik, oke ikuku siri ike, oke ikuku mmiri, nnupụisi ọjọọ, ikuku na-asọ asọ na ọbụna oke ifufe ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịmalite.
Ekwesịrị ikwu na ọ bụghị ihu oyi niile na-eme ihe ike. Ogologo ime ihe ike ma ọ bụ ihe egwu dị n'ihu mmiri na-adabere na iru mmiri nke ikuku ikuku dị ọkụ, na mgbakwunye na ọnụọgụ nke ikuku na-ekpo ọkụ nke na-emechi. O nwere ike ịbụ na ịrị elu nke ikuku na-ekpo ọkụ anaghị akwụ ọtọ ka ọ bụrụ n'igwe ojii na-emepe emepe, mana ụfọdụ nimbostratus ga-etolite na oke mmiri ozuzo. Otu n’ime ụkpụrụ kacha ekpebi ihe bụ ọsọ ikuku. Dabere na uru a, ikuku ikuku oyi ga-agagharị na ọsọ ọsọ nke ga, n'aka nke ya, mee ka ikuku na-ekpo ọkụ karịa n'ịdị elu. Ọ bụrụ na ikuku dị iru mmiri na ngagharị ahụ kwụ ọtọ, anyị ga-enwe ihu igwe na-eweta ọdachi.
Igwe ihu oyi na-agagharị ngwa ngwa, na-agba ọsọ n'etiti 40 na 60 km / h. Nke a na - eme ka oge ha dị n’agbata ụbọchị atọ na asaa. Ogologo ala nke mpaghara dum a na-emetụtakarị na-adịkarị n'etiti 500 na 5.000 kilomita. Banyere obosara, ọ nwere ike ịdị n'etiti 5 km na 50 km.
Mgbe ekwuru na ihu oyi na-eru nso, na ikuku na-ekpo ọkụ ikuku ikuku na-adịgide. O nwekwara ike ịbụ na ọ na-aga na ntakịrị ọdịda nke bụ ihe na-eme ka ikuku na-agagharị na mpaghara ebe ikuku ikuku na-adịchaghị adị. Ihe mbu anyi na-achoputa iji mata ihu oma bu nguzo nke igwe ocha. Igwe ojii ndị a bụ nke ụdị cirrostratus. Mgbe e mesịrị, se ha mepụtara igwe ojii dị ka Altocumulus ma ọ bụ Altostratus. N'oge a, ifufe na-adị nfe ma ọ nweghị ebe ọ na-aga.
Ka ihu oyi na-erukwu nso, igwe ojii na-ebuwanye ibu ma mmiri ozuzo na-esiwanye ike. Karịsịa, ihe kachasị egosi ịdị nso nke ihu oyi bụ mmụba nke ogo mmiri mmiri. Ifufe na-ebido gust ma ka enweghịkwa ebe kwụrụ chịm.
Mgbe anyị abanyela na ihu oyi, anyị ga-ahụ otu ọdịda na okpomọkụ, sie ike mmiri ozuzo nke na-esokarị oké ifufe, ifufe na gusts siri ike, ọhụụ na-adịghị mma na oké osimiri.
Ozugbo agafee n'ihu
Mgbe ihu oyi gafere, anyị ga-enwe ike ịhụ nnukwu mkpochapu na northwest na ọ ga-eme ka ọhụhụ ka mma. Ọnọdụ okpomọkụ ga-adalata ntakịrị ma enwee ike iru mmiri. Ikuku na-abawanye ngwa ngwa, n'ihi na ikuku dị n'elu anyị dị oyi ma ya mere ọ dị arọ.
Banyere igwe ojii, ụfọdụ igwe ojii dịpụrụ adịpụ nwere ike ịpụta mana enweghị mmiri ozuzo ọzọ. N'ebe ugwu, ọrụ nke ikuku ga-aga n'aka nri na n'akụkụ ndịda n'akụkụ aka ekpe n'ihi mmetụta coriolis.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu oyi na ihe niile metụtara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oyi ihu
Arnold GOMEZ dijo
Daalụ nke ukwuu maka ozi a. Enwere m ajụjụ.M bi na Tegucigalpa, Honduras, mana ebe a mgbe a na-ekwu na ihu ihu oyi dị, igwe ojii na-acha ọbara ọbara na mmiri anaghị ezo ma ọlị.
Zaghachi na ARNOLD GÓMEZ